ညမင်းသား: 12/01/2010 - 01/01/2011
ပြီးခဲ့တဲ့လက ခြေထောက်အတွက် အလှအပနဲ့ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ နည်းလမ်းကောင်းတွေကို တင်ပြခဲ့ပြီး ပါပြီ။ ဒီလတော့ ပိုပြီး ပြည့်စုံသွားအောင် လက်အတွက် အလှအပ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ နည်းလမ်းကောင်းတွေကို အပြီးသတ် ဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ်။
(Blood Pump Machine) တစ်ခု ပဲဖြစ်ပါတယ်..တစ်ရက်လျှင် ပျမ်းမျှ အကြိမ် ၁၀၀,၀၀၀ ခန့် ခုန်ရပြီး သွေးထုထည် ဂါလံ ၂,၀၀၀ ခန့် ညှစ်ထုတ် ပေးနေရပါတယ်.. လူ့သက်တမ်း တစ်လျှောက်လုံး မရပ်မနား စည်းချက်မှန်မှန် ညှစ်ထုတ်ပေး နေရပြီး အသက် ၇၀ အရွယ်ရောက်ပါက နှလုံးခုန်ခြင်း အကြိမ်ပေါင်း ၂.၅ ဘီလီယံ ကျော် ခုန်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်..
Hepatitis A အသဲရောင် အေ
Hepatitis B အသဲရောင် ဘီ
Hepatitis C အသဲရောင် စီ
Hepatitis D အသဲရောင် ဒီ
Hepatitis E အသဲရောင် အီး
အသဲသည် အလုပ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ပေးသည်။
1. အစာထဲက အဆီ၊ ဆီတို့ကို အစာခြေပေးသည်၊
5. ကိုလက်စထရော-သွေးခဲစေသည့် ပစ္စည်းများ၊ ပရိုတင်းများ ထုတ်လုပ်ပေးသည်။